Mareykanka oo si adag uga hadlay dhaq dhaqaaqyada Dowlada Somaliya ee gobolka – Kismaayo24 News Agency
Mareykanka oo si adag uga hadlay dhaq dhaqaaqyada Dowlada Somaliya ee gobolka
by admin 25th February 2020 0260
Madaxa arrimaha siyaasadda ee Mareykanka u qaabilsan golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay, Rodney Hunter ayaa isagoo khudbad ka jeedinayey kulanka golahaasi, wuxuu ka hadlay xaaladda Soomaaliya.
Mr. Hunter ayaa ugu horreyn ka hadlay dhaq dhaqaaqyada ciidan ee ay dowladda federaalka ka wado gobolka Gedo ee K/Soomaaliya, wuxuuna sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid aan la aqbali karin oo weecineyso dhaqaaliihii loogu talagalay amniga.
“Ciidamada milatariga dowladda Soomaaliya ee sida siyaasadeysan loogu daad gureeyey, looguna dagaal galiyey gobolka Gedo ma ahan mid la aqbali karo, waxayna taasi weecineysaa dhaqaalihii lagu heshiisyey ee loogu talagalay howlgallada amniga”. ayuu yiri madaxa arrimaha siyaasadda ee Mareykanka u qaabilsan golaha ammaanka.
Ugu dambeyn Rodney Hunte ayaa carabka ku dhuftay in sanadkaan 2020-KA Soomaaliya uu u yahay mid adag, islamarkaana laga rabo inay wax ka qabato barnaamijka deyn cafinta, u diyaar garowga doorashooyinka soo socda iyo inay AMISOM kala wareegto amniga.
Cudurka Coronavirus oo lagu arkay Sadax kamid ah Wadamada.
Soomaali ku xirnayd dal ka mid ah dalalka Carabta oo dalka ..
Weerar qasaaro kala duwan dhaliyay oo lagu qaaday Kaniisad weyn oo Ku Taala Dalka Masar
DEG DEG: Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jubbaland oo kismaayo laga soo masaafuriyay yaase bixiyay amarka xildhibaanka lagu soo tarxiilay??
Tifaftiraha K24 8th April 2017
Falanqeyn: Hadii ay adkaato in lawada shaqeen karin Yaamudan in uu is casilo khayre, Jawaari Iyo Farmmajo?